Hiran State - News: HS:- Axmed C/salaan oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo xili lagu dabiibayo dalka Kanada
HS:- Axmed C/salaan oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo xili lagu dabiibayo dalka Kanada
HS:- Kadib qarax ay dad badan ku dhinteen qaar badana ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa waxaa dadkii ku dhaawacmay ka mid ahaa Axmed C/salaan oo hore dowladii uu r/wasaaraha ka ahaa Nuur Cade ka noqday wasiir.
Axmed C/salaan oo markii uu qaraxu dhacay la saadaalinayey inuu gaaray dhaawac fudud hada xaalku sidaa wuu ka duwan yahay kadib markii dhaqtarkii ugu horeyey ee gacanta ku dhigay dhaawaciisa uu xaalada uga daray sida warar sugan lagu helayo. waxaa lagu soo waramayaa intii uu ku sugnaa Africa in qalnin dad badan layaab ku noqotay lagu sameeyey.dadka qaarkood waxey leeyahiin waxaa loo qalay si is dhaaf ah amaba u muqaal eg calaamada Chistian-ka iyadoo dhaqtarkii qalay meelkasta u jeexay jirkiisa siiba dhinaca caloosha.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya xaaalada dhawaciisa ayaa sheegaya in hada lagu daweynayo Isbitaal ku yaala dalka Kanada walow hadalkiisa uusan caadi aheyn maadama sida la xaqiijiyey ay caloosha barartay wajigana u duuban tahay si loola tacaalo suntii qaraxa oo qeybo badan jirkiisa ka mid ah wada gaartay.
Axmed C/salaan oo la saadaalinayey inuu isku soo sharaxi doono xilka madaxweynimada Soomaliya doorashada soo socota waxuu dhaawacmay xili uu gobolka Galgaduud ka abaabulayey arimo siyaasadeed.
Hadaba warbixinteen qeybteeda danbe la soco magaalada uu kaka jiro Isbitaalka iyo sida ay xaaladiisa uga deyrinayaan qaar ka mid.......
· admin on June 28 2012 10:11:46 · 0 Comments · 1986 Reads ·
14,613,594 unique visits